STOCK amalaphu - Quanzhou Omi nezingubo Co., Ltd
Okokuqala, ake uchaze umehluko omkhulu phakathi kokukhetha izindwangu zakho kuzitoko zethu noma kuzindwangu ezingokwezifiso.
1, - Izindwangu zamasheya ziyefana ncamashi nezindwangu zangokwezifiso, kepha ngezinketho ezimbalwa. Zingakhethwa ekubunjweni okwenziwe ngomumo nombala futhi azisali. izothunyelwa ngqo endaweni yethu yokugcina impahla. Kusuka kunoma iyiphi i-PO siqala ukusika ngokushesha lapho sithola idiphozi yakho.
2, - Izindwangu zangokwezifiso, ungabela ukwakheka, umbala, ukushesha kombala, isisindo, umsebenzi, ukuphinda usebenzise kabusha, njll, imvamisa kuthatha amasonto angaphezu kwama-5, izindwangu zesitoko zidinga nje amasonto ama-2-3, akudingeki ukuthi ziphikise eziningi imininingwane, isikhathi esithile sincike ebuningini.
Ishesha Kwinsizakalo Yemakethe
Ama-Start-up brand noma labo abakhetha uku-oda okuncane nokuvame kakhulu, bazothola uku-oda kusuka kumasheya kube yinto enkulu ekukhuleni komkhiqizo. Izizathu zilula.
Uku-oda kabusha nabakhiqizi abaningi kuzothatha okungenani izinyanga ezimbili ukwenza. Sihlose ukukhiqiza wonke ama-oda kabusha sisebenzisa izindwangu zesitoko emasontweni amahlanu nje kuphela. Lesi yisivinini sombani cishe okungekho umhlinzeki ongasinikeza. Ukulinda izinyanga zokwengeza kungaba ukufa komkhiqizo ngokulahleka kwempahla, izitayela, imibala noma osayizi abathengisiwe futhi ubone amakhasimende akho ethuthela kweminye imikhiqizo eyothenga imikhiqizo yawo kuyo.
Njengoba ukhula futhi wakha inqwaba yabalandeli, uzokwazi ukuhlela kusengaphambili i-PO yakho elandelayo ne-oda langaphambilini nathi izindwangu zakho ezidingekayo ukuze kungabi nesikhathi esilahlekile ekukhiqizeni ngezindwangu ezingokwezifiso.
Sisebenza ngokusondelene nemikhiqizo yethu futhi sibasize bahlele ama-oda wangaphambilini noma ama-top ups futhi balungiselele izinto futhi bazilungiselele ukuze kuthi lapho i-oda langempela lingena, sonke sihlelelwe ukuya ngosuku okwenziwe ngalo i-oda.
1. Isizini ngayinye izobona imibala emisha iza ngokuhamba phambili; ngakho-ke, imibala ivuselelwa njalo ezinyangeni eziyisithupha.
2. Uma kwenzeka ucela izindwangu ezingekho esitokweni, sicela usazise, ​​sizobheka okufanayo noma okufanayo.
Izindwangu ku-Plain Colors & Iphethini
Ngezansi sibala izindwangu eziningi, umbala osobala noma uthayi wedayi noma iphethini yokuphrinta yedijithali oyisebenzisayo. Lokhu kukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yezindwangu ezifakwe ezingutsheni zakho ezisebenzayo zizoba sezingeni eliphakeme kakhulu emhlabeni ngokuhambisana neLululemon, uma kungenjalo kangcono ekucingeni umswakama, kokucindezelwa kanye nezimpawu ezithuthukisa umzimba. Kokubili kunga-odolwa kucace futhi kuprintwe.